रोचक समाचार Archives - SAMACHAR SANJAL
Category: रोचक समाचार
सुटुक्क काँकरभिट्टा आएका ट्रम्पको चाहना- सोलुखुम्बुको गाउँमा छाप्रो बनाएर सगरमाथा हेर्दै जिन्दगी बिताउने!
ब्रेकफास्ट लिइरहेको बेला मोवायलमा रिङ बज्यो । मेची महानगरका मेयरले कल गर्नु भएको रहेछ । उठाए । उताबाट आवाज आयो–‘मोहनजी कता हुनुहुन्छ ?’ मैले भने–‘नमस्कार मेयर सा’व, घरमै छु, आज विहानै कल गर्नु भयो, किन होला ?’ उताबाट फेरि आवाज आयो–‘एउटा रिक्वेस्ट गरुँ कि भनेर नि । अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट छन् नि, ट्रम्प । आँखा जँचाउन भोलि काँकरभिट्टा आउँदैछन् रे, यसो लोकतन्त्र पोस्टबाट एक जना रिपोर्टर पठाइदिने कि भनेर आग्रह गरेको नि ।’ ‘हुन्छ नि, धन्यबाद’ भन्दै मैले फोन राखिदिएँ । ‘गुड मर्निङ सर ! अबको सेडुयल कता छ ?’ भोलिपल्ट…
March 10, 2018 March 10, 2018 admin>
चर्चित निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता युवराज लामाले निकै समय भयो, काठमाडौं छोडेर बाराको निजगढलाई मुकाम बनाएको । खासगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्य–सचिव भएर चार बर्षे कार्यकाल पुरा गरेपछि उनले काठमाडौं छोडेका थिए । राखेपको सफल सदस्य–सचिव भएर पनि आखिर किन छोडे लामाले काठमाडौं ? किन बस्न थाले निजगढ ? उनी के गर्छन् निजगढमा ? प्रस्तुत छ, यी तमाम जिज्ञासा मेटाउन केन्द्रबिन्दु टिमले बाराको निजगढ नै पुगेर लामासँग गरेको कुराकानी –
नेपाल आइडलका आयोजकलाई चेतवानी
फाल्गुन २५, एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारित नेपाल आइडलको पहिलो संस्करणका विजेता बुद्ध लामाको एउटा अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको छ । अडियोमा बुद्धले नेपाल आइडल भएवापत पुरस्कारमा जितेको कार अहिलेसम्म चलाउन नपाएको गुनासो गरेका थिए. सार्जनिक भएको एउटा अडियोमा उनले भनेका थिए, ‘मैले पुस्कारमा पाएको जितेको कार पाएँ, तर ब्लु-बुक पाएको छैन । ब्लुबुक नपाएपछि गाडी कसरी चलाउने ?’ लामाका अनुसार उनलाई ८ लाख रुपैयाँ ट्याक्स मागिएको छ, जुन तिर्न सक्ने स्थितिमा उनी छैनन् ।‘म कति धाउनु ? कति धाउनु ? आठ महिनादेखि धाउँदैछु हेर्नुस । यो त मेरो…
ओहो ! नेपाली नोटमा कति धेरै गल्ती -पुरै पढनुहोस तपाई हरु अचम पर्नुहुन्छ !
प्रविधिसमाचारओहो ! नेपाली नोटमा कति धेरै गल्ती -पुरै पढनुहोस तपाई हरु अचम पर्नुहुन्छ ! भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको दुई हजार रुपियाँमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिएको छ । सो रुपियाँमा १५ भाषामा दुई हजार रुपियाँ उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपालीमा समेत ‘दुई हजार रुपियाँ’ शुद्ध लेखिएको पाइन्छ । तर, नेपाली रुपियाँमा भने गल्ती नै गल्ती भेटिन्छन् । श्री नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ १००० (प्रत्येक नोटमा रुपियाँअनुसार अंक उल्लेख) रुपैयाँ एक हजार तुरुन्त पाइने छ प्रत्येक नेपाली रुपियाँको अघिल्लोपट्टि बीचभागमा…
नेपालमै पहिलो पटक बुलेट साइकलको बिक्री धमाधम हुँदै, १८ किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने यो साइकलको मुल्य कति ? हेर्नूहोस बिबरण सहित
March 7, 2018 admin>
नेपालगन्ज – हरेक महिना करिब दुई हजार बढीको हाराहारीमा साइकलको बिक्री हुँदै आएको नेपालगन्जमा हाल आएर नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक किसिमको ‘बुलेट साइकल’ को बिक्री पनि यहाँबाट सुरु गरिएको छ । नेपालगन्जमा साइकलका लागि अग्रणी मानिएको बीबी साइकलले आफ्नै ब्रान्डको बुलेट साइकल यहाँ भित्र्याएर बिक्री सुरु गरेको हो । साइकलमा ३ सय ६५ भेराइटीको सेवा दिइरहेको दाबी गर्दै आएको बीबी साइकलका प्रबन्ध निर्देशक मोहम्मद सरिफ बागवानले भने, “बुलेट साइकल नेपालगन्जका लागि मात्र नभई नेपालकै लागि नयाँ भेराइटी हो ।” “औपचारिक रूपले लन्च गरेर बिक्रीका लागि सबैतिर पठाइएको छ,” बीबी साइकल…
महोत्सवमा सरस्वतीले एकाएक कपडा खोलेपछि बबाल, युवकहरु उत्तेजित भएपछि प्रहरीले गर्यो पक्राउ
कोहलपुर – बाँकेको कोहलपुरमा जारी कोहलपुर औद्योगिक व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव गायिका सरस्वती लामाको सांगितिक प्रस्तुतिका कारण महोत्सवस्थल अनियन्त्रित भएको छ । लामाले महोत्सवमा एउटा गीत गाएर दोस्रो गीत ‘काले दाई काले दाई’ गाउने क्रममा शरिरमा लगाएका कपडा एकपछि अर्को खोल्न थालेपछि सहभागी युवाहरु अनियन्त्रित भएपछि लामाको प्रस्तुति बीचमै रोकिएको छ । लामाको गीतसँगै सहभागी युवाहरु उच्छृंखल भई अश्लीलता प्रदर्शन गर्न लागेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डिएसपी यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम स्थलबाट प्रहरीले ३ जना युवालाई नियन्त्रणमा लिइएको र अन्यको खोजी भइरहेको…
वैशाखमा सलमान खानको नेपाल आगमन हुने, सलमान खानले सारा नेपालीलाई गरे यस्तो आग्रह
March 4, 2018 March 4, 2018 admin>
काठमाडौं । भारतीय चर्चित कलाकार सलमान खानको नेपाल आगमन रोकिएको छ । खान फागुन २६ गते शनिबार काठमाडौंमा हुने ‘दबंग’ द सलमान खान लाइभ इन नेपाल’ कन्सर्टमा सहभागी हुन आउने भन्दै आयोजकले प्रचार गरेको थियो ।ओडीसी इन्टरटेनमेन्टका अनुसार खानको नेपालको कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित मात्रै गरिएको हो । एक दुई दिनमै वैशाख पहिलो साता गर्ने गरी कार्यक्रमको नयाँ मिति घोषणा गरिने भन्दै उसले टिकट सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी सम्वद्ध अखिल नेपाल सांस्कृतिक महासंघले सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्दै कार्यक्रम रोक्न दबाब दिँदै आएको थियो । कार्यक्रम स्थगित गरेकोमा…
हामी दुईबाट तीन हुने प्रयास गरिरहेका छौं – महानायक हमाल
Tweet कुनै बेला अभिनेता राजेश हमाललाई सञ्चारकर्मीले विवाह कहिले गर्ने ? भन्ने जिज्ञासा राखेर हैरान बनाउँथे । लगन आएपछि, साइत जुरेपछि, समय आएपछि…भन्दै हमाल सञ्चारकर्मीबाट पन्छिने प्रयास गर्थें । अन्तत: हमालले मधु भट्टराईलाई जीवन संगिनी बनाए । अहिले हमालले वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गरेकै दुई वर्ष हुन लागेको छ । सामान्य मानिसको परिवारमा समेत विवाह भएको केही वर्षपछि सन्तानका बारेमा सोधिखोजी हुन्छ । अभिनेता राजेश हमालका हकमा यो कुरा लागू नहुने कुरै भएन । हालै सिक्किम पुगेका हमाल दम्पतीलाई सञ्चारकर्मीहरूले बुवा–आमा कहिले बन्ने ? भन्ने जिज्ञासा राख्न भ्याए । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासा…
काठमाडौँ — हलिउडका स्टाइलिस्ट हिरोइनमध्ये पर्छिन्— जेनिफर लरेन्स। उनको ड्रेसअप र फेसन सेन्सको प्राय: प्रशंसा हुने गर्छ। तर हालै एउटा इभेन्टको फोटो सुटपछि भने ओस्कार विजेता अभिनेत्रीको ड्रेसअपबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी आएका छन्,उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने गरी।रिलिजका क्रममा रहेको ‘रेड स्प्यारो’ प्रोमोसनका लागि दुई दिनअघि फिल्म युनिटसँगै लन्डन पुगेकी जेनिफरले गर्मी याममा झैं भर्सेस गाउन र स्यान्डल लगाएकी छन्। उनीसँगै उभिएका निर्देशकलगायतले चाहिँ बाक्लै कपडा र बुट लगाएका छन्। यसमा टिप्पणी गर्नेहरूले यसलाई ‘अप्रत्याशित र लिंगभेदको विम्ब’भनेका छन्। यति बेला अत्यधिक जाडो भएको लन्डनमा गरिएको यो फोटो सुटमा जेनिफरको पहिरनलाई लिएर सोसल…
खेतमा भएको माटोको ढिस्को भत्काउँदा चम्कियो भाग्य
March 3, 2018 admin>
एजेन्सी। बेलायतको सहर केम्सफोर्डका एक व्यक्तिको भाग्य उनको खेतमा भएको माटोको ढिस्कोले फेरिदिएको छ । यहाँका क्रिस कटलर नामका व्यक्तिले आफू सानै हुँदा सुनेका कथाहरुको आधारमा खेतमा खजाना खोज्दै थिए । उनी खजानाको खोजीमा आफ्नो घर आसपासका खेतहरुमा विगत केही दिनदेखि घुमिरहेका थिए । केही समयअघि उनले थाहा पाएका थिए यी खेत भएको ठाउँमा एंग्लो सेक्सनले १०० वर्षभन्दा पहिले खजाना लुकाएका थिए । क्रिस त्यही खजाना खोज्दै थिए । केही दिनसम्म कोसिस गर्दा उनले एकाएक एउटा सुनौलो रंगको पत्थर भेट्टाए । उनले यो पत्थरलाई सफा गर्दा चकित परे । यो…